Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Adaobi Anukwu, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter-n’ny @DigiAfricanLang amin’ny 21-27 Aogositra · Global Voices teny Malagasy » Print
Fantaro i Adaobi Anukwu, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang amin'ny 21-27 Aogositra
Voadika ny 28 Aogositra 2019 14:29 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika imanoela fifaliana
Sary natolotr'i Adaobi Anukwu.
Ny taona 2019, ho fandraisana anjara amin'ny fanentanana an-tambajotra sosialy mba hankalazana ny hamaroam-pitey ety anaty aterineto , hifandimby hitantana ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang  ireo Afrikàna mpikatroka sy mpiaro ny teny mba hizarana ireo traikefany tamin'ny resaka fanomezana aina vao sy fampiroboroboana ireo teny Afrikàna. Mikasika an'i Adaobi Anukwu (@ada_onyenkuzi ) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity amin'ny maha-mpampiantrano azy ity lahatsoratrana fampahafantarana ity.
Adaobi Anukwu no anarako, teraka sy lehibe tany Lagos, Nizerià. Mpitana bokim-bola matihanina, mpandraharaha no sady mpikatroka ho an'ny fiteny Igbo. Liana tamin'ny fampiroboroboana ny fiteny Igbo aho rehefa tonga sainga fa nisy fihenan'ny fahalianana tamin'izany fiteny izany, indrindra fa eny anivon'ny taranaka tanora. Mihamihena ny isan'ireo mpiteny ny fiteny Igbo, izay nanosika ahy handray ny andraikitra amin'ny fampahatsiarovan-tena momba ilay fiteny sy hampiroborobo ilay kolontsaina ihany koa.
Azoko ambara angamba hoe mety ho 60:40 ny fifandanjàna eo amin'ny teny Igbo an-tambajotra sy tsy an-tambajotra. Milaza izany aho satria efa voapetraka izao ny fandrosoana ara-niomerika maro (rindrambaiko fianarana, torolalana famakianteny / fanoratana, kilalao, sns.), izay mbola tsy nisy taona vitsivitsy lasa izay. Ary azo antoka fa efa misy toerana ho an'ny fivoarana.
RV: Lohahevitra inona no tianao hifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang?
Tiako hafantohana ny fitsipi-panoratana fototra sy fampitomboana voambolana, rindrambaiko izay manamora ny fianarana ny teny Igbo, kolontsaina sy fombafomban'ny vahoaka Igbo, ary koa lohahevitra maro samihafa. Horesahako ihany koa ny mikasika ireo ezaka ataon'ny governemanta sy ireo fikambanana tsy miankina mba hampiroboroboana ilay teny.
Ny zotom-po amin'ny fahitana ny fiteniko resahan'ny maro, tanora sy antitra, no antony voalohany manosika ahy. Ny fahavelomany raha mbola misy olona eto ambonin'ny tany ary tsy ho tratran'ny faharinganana mihitsy no fanantenako sy nofinofiko ho an’ ilay fiteny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/28/142800/
 amin'ny fanentanana an-tambajotra sosialy mba hankalazana ny hamaroam-pitey ety anaty aterineto: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/05/13/a-new-rotating-twitter-campaign-nativelangstech-will-amplify-the-voices-of-native-language-activists/